किन बढ्दैछ, बलात्कार ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
किन बढ्दैछ, बलात्कार ?
बलात्कारका घटना बढ्दो छ, किन ? किन दिन–प्रतिदिन बलात्कारीको मनोबल बढ्दो छ ? किन हाम्रा छोरीहरूलाई दाजुभाइ, काका र बाबुबाटै त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ?
किन उनीहरू लोग्नेमान्छे देख्ने बित्तिकै अर्को नजरले हेर्न बाध्य छन् ? नेपाली समाज यो भयले ग्रसित छ । अन्ततः एउटै प्रश्न फेरि पनि घटना दोहोरिन्छ, किन ? छोरीहरूलाई हामीले सुरक्षित वातावरण दिन किन सकिरहेका छैनौं ? हाम्रो समाजको बनोट वा कानुन कार्यान्वयनमा कमी वा रक्षक नै भक्षक भएर यस खाले दुष्प्रवृत्ति मौलाएको हो ?
अझै बाहिरिन नसकेका बलात्कारका घटना थुप्रै छन् । त्यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने र पीडकलाई दण्डित गर्ने त्यसतर्फ बहस हुन जरुरी छ । हामीले राज्य संरचनालाई परिवर्तन गर्‍यौं, तर सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छैनौं । बलात्कारका घटनामा समाजले अझ बढी पीडितलाई नै गलत दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ । यसले पनि बलात्कारीको मनोबल बढाइरहेको छ । कानुनको गलत व्याख्या गर्नाले पनि बलात्कारी उम्कने गरेका छन् । हामीले अब सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु पहिलो जिम्मेवारी भएको छ । राज्यबाट बलात्कारका घटना अनुसन्धान गर्ने विशेष टोलीको व्यवस्था गर्दै यी घटनाको छिनोफानो प्रहरी चौकीदेखि अदालतसम्म फास्ट ट्रयाकको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । अन्यथा यस्ता कुकृत्य अझ बढ्दै जानेछ । जसले हाम्रो समाजलाई नै दूषित बनाइरहेको छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १०:५५
विश्राम लिनु वेश
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अस्वथ्य हुनुहुन्छ  । उहाँको रोग तत्काल निको हुने पनि होइन  ।
मानिसको जीवनमा आरोह–अवरोह आइरहन्छन् । कठिन मोडहरू आइरहन्छन् । त्यो बेला सही निर्णय लिनसके मात्र उसको पहिचान पछिसम्म रहन्छ । इतिहासले सम्झन्छ । हो, त्यस्तै कठिन निर्णय लिने घडी अहिले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आइपुगेको छ । यो बेला उहाँले पद र प्रतिष्ठा हेर्ने कि आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति ? उहाँले आफ्नो बुँताले भ्याएसम्म देश र जनताको लागि धेरै गर्नुभयो । कति सपना देख्नुभयो, कति सपना जनतालाई देखाउनुभयो । यद्यपि कामको परिणाम सतहमा आउन सकेन । तथापि गोरेटो कोर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ । स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी वर्गले प्रधानमन्त्रीकै ‘स्पिरिट’ मा काम गर्नसकेको भए विकास र समृद्धिका डोबहरू देखिसकिन्थ्यो । तर कर्मचारी प्रशासनले राम्ररी काम नगर्दा देशको २१ वटा गौरवका आयोजनाहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको काम सन्तोषजनक हुन सकेनन् । तामाकोशी, मेलम्चीजस्ता योजनाहरू पूरा भएनन् । राज्यसंयन्त्र कमजोर बन्दा सिन्डिकेटधारी, मेडिकल माफिया, निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठाए । निश्चय नै ओली यी सबै विकृति/विसंगति हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर अब उहाँलाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन । अब उहाँले आफ्नो पालामा थाती रहेका काम आफूपछिको पुस्ताले गर्ने विश्वास गरी पदबाट विश्राम लिनु उचित हुन्छ ।